बलात्कार घटनाको झुठो उजुरी दिएको कसुरमा सात दिन कैद ! – इन्सेक
बलात्कार घटनाको झुठो उजुरी दिएको कसुरमा सात दिन कैद !
सप्तरी ०७८ पुस १५ गते
१७ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै झुठो उजुरी दिएको कसुरमा उनकी आमालाई सप्तरी जिल्ला अदालतले पुस १४ गते सात दिन कैद सजायको फैसला गरेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद दाहालको इजलासले उजुरी विपरित बयान दिइ ‘होस्टाइल’ भएकी उजुरीकर्तालाई यस्तो फैसला गरेको अदालतका स्रेस्तेदार कुमार मास्केले बताउनु भयो ।
बालिकालाई छिन्नमस्ता गाउँपालिका–३ सखडाका २१ वर्षीय अब्दुल मियाँले ०७७ असोज १३ गते बलात्कार गरेको भन्दै पीडितकी आमाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा असोज २८ गते उजुरी दिएकी थिइन् ।
बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा ०७७ असोज २८ गते गरिएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मियाँलाई ०७७ कात्तिक २ गते गिरफ्तार गरी कात्तिक ३ गते उजुरी दर्ता गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतमा कात्तिक २६ गते मुद्दा दायर भएकोमा कात्तिक २८ गतेदेखि मियाँ पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा थुनामा रहेको प्रहरीले जनायो ।
सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसलापछि कात्तिक २८ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा रहेका मियाँ रिहा भएको प्रहरीले जनायो ।